Julia Parshuta - "oke"
PARSHOOTA - n'okpuru aha okike dị otú ahụ mara onye na-agụ egwú Russia, na nso nso a na omee egwu ahụ, Julia Parshuta. Nwatakịrị nwanyị ahụ pụtara n'etiti ọtụtụ narị ụmụ nwanyị na-abụ abụ na-enwe ọchịchọ siri ike maka uto ọkachamara. Ọ na-adị njikere mgbe niile iji nwalee ihe oyiyi ọhụrụ mbụ - site n'echiche dị mfe iji sexy. Ọ bụ nnọọ ihe okike na a kpọrọ ọtụtụ akwụkwọ ndị a ma ama ka ha bịa na ya ihe karịrị otu ugboro. N'afọ 2011, nwa agbọghọ ahụ kwetara. Mkparita akwukwo nke akwukwo ihe gbasara magazin Maxim bu ndi ozo gosiputara na Julia Parshuta bu umuaka mara oke mma, ya na otutu talent ya di otutu.
Ụzọ na-aga nke ọma
A mụrụ Julia na Sochi n'afọ 1988. N'anya ịhụnanya, mmasị na ịgba egwú oge ochie na ọchịchọ ịkụ abụ adịghị egbochi nwa agbọghọ ahụ ịkwụsị akwụkwọ na ọlaọcha ọlaọcha ma ghọọ onye mmụta nke PFUR. Ihe nkiri ahụ dọtara ya mgbe niile, ya mere, na mahadum ọ na-egwuri egwu na KVN, soro na asọmpi dị iche iche, gbalịrị onwe ya dịka onye ngosi TV. Julia bụ onye mmeri nke isi ahịa nke Crystal Crown nke asọmpi Moscow (2004), onye mmeri nke asọmpi ahụ ghọọ Widget nke MTV (2007), onye nchịkọta nke Ụlọ Ọrụ Seventh Star, bụ nke ghọrọ ya tiketi iji gosi azụmahịa. N'afọ 2007, Parshuta sonyeere òtù Yin-Yang, ma afọ anọ mgbe nke ahụ gasịrị, o kpebiri ịnwale onwe ya dị ka onye na-agụ egwú. Ọrụ mbụ ya bụ abụ "Ndewo", onye otu "Ị bụ paswọọdụ m." Iji zụlite nkà ya ma merie ndị gere ntị, onye ọbụ abụ kpebiri ịmalite ọzụzụ na New York. Asụsụ Bekee mbụ gụrụ egwu, otu n'ime ihe ndekọ kasịnụ na-akpọnwụ Sony Music Entertainment bịanyere aka na nkwekọrịta na Yulia n'afọ 2013.
Taa, Julia Parshuta bụ onye na-amụrụ ụlọ akwụkwọ drama Herman Sedakova. Nwatakịrị nwanyị ahụ gbara ọsọ na usoro "Mma", na 2014 ndị na-ege ya ntị hụrụ ya dịka onye na-egwu egwu otu n'ime ọrụ ndị dị na ihe nkiri "Mystery of the Princesses." Mgbe onye omekorita a novice gwara onye nduzi ọrụ bụ Alexander Hwang. Ihe nkiri ikpeazụ site na Julia Parshuta - ọrụ nke enyi nwanyị Julia na egwu efu "Barmen", nke Dina Shturmanova gbara ya.
Mgbe Julia Parshuta nakweere òkù ịbịa na magazin "Maxim", e kpebiri ibi na onyinyo nke ụtụtụ nke ụtụtụ. Nye kpakpando nke eserese na-egosi "Nye nwata ahụ!" Ha nyere uwe akwa na -acha uhie uhie na-acha ọcha na-acha ọcha, ebe ebe ịgba égbè ghọkwara ụlọ ndị nwere nnukwu akwa na ihe mgbochi kpụkọrọ ọnụ nke chiffon. Nwepu uwe ime onye na-abụ abụ abụghị nke mbụ. N'ịbụ onye na-ekere òkè na asọmpi mara mma ma na- arụ ọrụ dị ka ihe nlereanya , ọ karịrị otu mgbe e merụrụ emerụ. Tupu ntọhapụ nke esemokwu ahụ, onye nchịkọta akụkọ ahụ mere ka ọ ghọta na Julia ekwughị na ihe mkpuchi ya na foto ya nwere akwụkwọ "Oku kachasị mma nke mba ahụ!". Nwatakịrị nwanyị ahụ zara n'enweghị ihere na ọ chọghị. Ọbụna ọ na-ekwu na onwe ya maara banyere izu okè nke akụkụ a nke ahụ ya. N'ikpeazụ, nnọkọ foto na magazin "Maxim" abụghị ụzọ kachasị mma isi gosipụta ụdị Julia Parshut bụ nwa agbọghọ mara mma, kwuru ajụjụ nke onye ọbụ abụ na-agụ egwú.
Olivia Wilde na-ese foto maka magazin kacha
Nastasya Samburskaya - ihe nha 2014
Foto nke Anna Koshmal 2013
N'ịdị ọcha nke ahụ ya Julia enweghị obi abụọ. Iji mee ka o yie ihe na-anwa anwa, ọ na-agakarị na-aga mgbatị ma na-eche maka nri. Iji hụ na nwatakịrị nwanyị dị afọ iri abụọ na asaa ahụ meriri, ọ ga-ezu iji nweta mbipụta November nke magazin "Maxim" maka 2011 ma ọ bụ iji mara nke ọma na gallery anyị.
Ọdịdị nke Justin Bieber
Kim Kardashian etemeete
Ọdịmma na ihe ịga nke ọma
Olivia Palermo - ụdị
Christy Brinkley - nlereanya na 61 afọ
Ariana Grande na-enweghị etemeete
Nina Dobrev - nnweta 2014
Irina Sheik na-enweghị ndozi
Style nke Selena Gomez 2014
Egwuregwu Lana del Rey
Style nke Selena Gomez
Foto foto Ani Lorak na nwa ya nwanyị
Ntụ ụtọ nke ugu
Mkpụrụ ọgwụ paracetamol kwa ụbọchị maka ụmụaka
Dumplings maka ofe - uzommeputa
Isi isi acetone si n'ọnụ onye toworo eto bụ ihe kpatara ya
Ude nke mmiri ara ehi na mmiri ara ehi
Atresia nke esophagus na ụmụaka
Pamela Anderson na Sergey Ivanov
Mkpụrụ ndụ uhie uhie a na-acha ọbara ọbara n'ime mmamịrị
Ọ bụ ụmụaka
Foto ndị dị na kichin
20 ntutu isi maka ụmụ nwanyị umengwụ
Nkume Jade - Njirimara anwansi
Ejiri ejiji 2013
Igbe maka seedlings
Mkpụrụ Cubes maka ihu - ntụziaka
Ọrịa nke akụrụ na urinary tract
Kedu ngwa ndị eji ejiji maka 2014?
Kedu ihe bara uru maka ọka porridge?
A machibidoro akwụkwọ Tupac Shakur na uwe Madonna mma
German Shepherd Dog - àgwà nke ụdị